Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Websites Sharing » YOu tube download
1 YOu tube download on 14th May 2009, 11:33 pm
ဒီမှာ video လေးတွေ့ လို့ တင်လိုက်ပါတယ် .. အဲဒီ အထဲ က အတိုင်းလေး လုပ်ကြည့်လိုက်ပေါ...
2 Re: YOu tube download on 8th August 2009, 4:18 pm
တညျနရော : လောကကြီးရဲ့တစ်နေရာ
မှတျပုံတငျသောနေ့ : 2009-07-29
ဘယ်မှာတုန်း vedio က
3 Re: YOu tube download on 8th August 2009, 4:34 pm
You tube downloader ကိုပြောချင်တာလား မသိဘူးနော် .. ကိုထက် ..
4 Re: YOu tube download on 8th August 2009, 4:36 pm
Connection မကောင်းလို့ မမြင်ရတာနေပါလိမ့်မယ်....
5 Re: YOu tube download on 8th August 2009, 10:59 pm
Video ကလေးတင်ပေးထားတာဗျ ... connection မကောင်းလို့ထင်တယ်နော် .. ကျွန်တော့ဆီမှာတော့မြင်ရတယ် ..
6 Re: YOu tube download on 9th August 2009, 7:38 pm
ဖြစ်နိုင်ရင် video လေးပြန်တင်ပေးပါလားဗျာ
7 Re: YOu tube download on 9th August 2009, 8:00 pm
ကျွန်တော်လည်းမမြင်ရဘူးဗျ.... avi သို့မဟုတ် Video format တစ်ခုခုနဲ့ပြန်တင်ပေးပါလား
8 Re: YOu tube download on 10th August 2009, 2:58 am
ဟိုက် တွားပြီ .. တိန်ပြီဗျိုး ... ဒီမယ် အဲလာ က ဖျက်ခံလိုက်ရပြီလို့ပြောတယ်ဗျ .. အဲဒီ့မယ် မရှိဘူးတဲ့ .. အီး .. ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်မသိရယ် .. Youtube ကနေပြီးတော့ down ဖို့ရာ လင့် ကလေးတွေ တော့ရှိတယ် အဲဒီ့ ကနေပြီးတော့ ကိုယ် က youtube link သိရင်တော့ ရပြီဗျာ အဲဒီအောက်က နေရာကလေးတွေကနေပြီးတော့ ဆွဲကြည့်လိုက်ဗျာ ..
Last edited by N@Y Y!N3 on 5th November 2009, 6:35 pm; edited 1 time in total (Reason for editing : လင့်တွင် ကုဒ်ခံခြင်း)
9 Re: YOu tube download on 10th August 2009, 1:49 pm
ကိုထက် က တော့ လုပ်ပြီဗျာ
10 Re: YOu tube download on 5th November 2009, 3:19 pm
ဒီနေရာတွေကနေလည်း youtube link တွေကို ထည်.ပြီး video တွေကို download လုပ်လို.ရပါတယ်။
Last edited by N@Y Y!N3 on 5th November 2009, 6:34 pm; edited 1 time in total (Reason for editing : လင့်တွင် ကုဒ်ခံခြင်း)
11 Re: YOu tube download on 11th November 2009, 6:55 pm
12 Re: YOu tube download on 12th November 2009, 6:11 pm
youtube ကနေဒေါင်းဖို့ download helper addon လေးကိုသာဆောင်လားထားပဲ့
13 You Tube က နေ အလွယ်တကူ ဒေါင်းလော့ ချနိုင်ရန် on 18th November 2009, 4:15 pm
ကျနော် ဒေါင်းလော့ ချတာက တော့ You Tube Video တစ်ခု ကို လင့်ကို ယူ ပီး ( ဥပမာ )
ဒီသီချင်း ကို ဒေါင်းလော့ချင်တယ်ဆိုရင်
...... Youtube နေရာ လေး မှာ Voobys ဆိုတာ လေး ကို ရိုက်ပီး အဲဓီလင့်အတိုင်းဒေါင်းလော့ဆွဲရင် ပိုပီးလွယ်ကူမယ်ထင်ပါတယ်..Download Manager မရှိဘူးဆိုရင်ပေါ့....ကျနော် ရေးထားတာ မှားတယ်ဆိုရင်ခွင့်လွတ်ပေးကြပါ... [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
Last edited by N@Y Y!N3 on 18th November 2009, 6:03 pm; edited 1 time in total (Reason for editing : လင့်များတွင် ကုဒ်ထည့်ခြင်း)
14 Re: YOu tube download on 14th March 2010, 2:07 pm
As for me, firstly open
and then download freestudiomanager. It help us in YouTube video downloading process n also asaconverter. Sorry for my mistake friends as my first writing like this. I hope all of u like it.
Last edited by solakoko on 14th March 2010, 4:27 pm; edited 1 time in total (Reason for editing : Link ကို Code ခံခြင်း)
15 Re: YOu tube download